Coveralls clothes Na-arụ ọrụ uwe • ọkachamara P&M kọmputa embroidery
Uwe elu A na-eji ha n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, ọdịiche ha dịgasị iche iche na-eme ka ha daba n'ọnọdụ dị iche iche, ma ebe a na-atụ aro ntọala ndị nwere ike ịtụfu na nke plastik.
Enwere ike iji akwa ahụ mee ihe maka Uwe i eriri afọ. Site na ya, ị nwere ike kpuchido akụkụ ahụ gị niile na uwe nkeonwe megide ihe na unyi.
Maka mma na nkasi obi, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-eji azịza ndị ọzọ, dị ka ihe dị iche iche na-akwado uwe ahụ na aka, na-egbochi ya ịpụ.
Anyị na-enye gị na onyinye anyị a gwara mmanụ, yana nsị oge ọkọchị dị mkpa na suut ichebe iche iche.
Ọdịdị dị elu nke ihe ndị ahụ na-ekwe nkwa ogologo oge nke suut, mana na-enwe ikuku zuru oke, nke na-egbochi ịzere oke ọkụ.
Isi ihe kpatara ya ọrụ suut bụ iji kpuchido uwe megide mmebi ma ọ bụ mmachi, ebe ebumnuche nke uwe na-echebe megide mmiri ma ọ bụ ọkụ.
Anyị bụ ndị a nkesa nke ika coveralls 3M, Dupont, Leber & Hollman, Reis na resin. Ejiri akpa na-eme ka ụfọdụ setịpụrụ baa ọgaranya na ikpere nke na-enye ohere itinye nkwụnye ikpere maka ogologo ọrụ mgbe ha na-egbu ikpere. A na-eme coveralls ndị ahụ site na seams siri ike na mpaghara ndị kachasị emetụta.
Uwe ejiji n'oge okpomọkụ
N'ihi ọdịiche dị iche iche na ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ, anyị na-enye na-arụ ọrụ egonke ejiri ihe ikuku na-enye ohere nnwere onwe ịgagharị, na-egbochi ọsụsọ kpụ ọkụ n'ọnụ n'oge ọrụ anụ ahụ. Uwe ndị dị otú a zuru oke maka ịrụ ọrụ na ebe a na-arụ ụgbọ ala, ndị na-adọkpụ ihe, ndị na-akụ mmiri na ndị ọzọ - ebe ọ bụla enwere nnukwu mmetọ nke ihe ndị siri ike ịsacha.
N'akụkụ nke uwe elu oge okpomọkụ, e nwekwara nsụgharị ndị na-enweghị ntụ, ha nwere ike mechaa ya nkpuchi ma ọ bụ jiri okpu agha. A na-eji akwa akwa mkpuchi echebe akwa textiles nke na-eme ka ojiji dị ogologo oge. Maka ogo ka mma, ụfọdụ ụdị emeela ka mmiri sie ike iji chebe megide ịkwaa na abrasions. Anyị nwekwara ụdị nwere akpa ekwentị.
Uwe oyi niile
Winter ọrụ overalls bụ ihe ọzọ na uwe ejiji na-arụ ọrụ nke mejupụtara uwe ogologo ọkpa na ajị anụ. Uru ha bụ nsụgharị na-echebe megide unyi n'etiti ọkwa onye ọ bụla. Ekele maka iji ngwakọta ihe kwesịrị ekwesị nke ihe, ọ bụghị oke oke, nke na-enye ohere nnwere onwe imegharị. Uwe oyi niile dị na onyinye anyị bụ ụlọ ọrụ Reis mere.
A na-eji akwa polyester mee akwa mkpuchi a na-edozi, nke gunyere akwa ahụ. Ejirila roba pụrụ iche mee ka azụ dozie azụ maka ezi nnwere onwe ijegharị. Modelsdị ndị a dabara adaba maka ndị welders, ndị na-ewu ụzọ, ndị na-edozi akwa na ndị na-ewu ụlọ. A na-eji ngwongwo ndị ọrụ arụ ọrụ na-enye gị ohere ịchekwa ekwentị ma ọ bụ obere ihe. Ihe nkedo n'úkwù na aka uwe na-egbochi ịdọrọ mgbe ị na-agagharị. Modelsfọdụ ụdị nwekwara akpa maka pad iji belata nrụgide mgbe ị na-arụ ọrụ ikpere.
Ihe mkpuchi na-abụghị nke a kpara akpa na nke sịntetik
Ezubere nchekwa pụrụ iche sitere na ụlọ ọrụ dịka 3M ma ọ bụ Dupont iji chebe ihe ndị na-emerụ ahụ. A na-arara uwe ndị a na-enye onyinye na ndị ọzọ. ndị na-ese ihe, ndị dinta na ndị mmadụ na-emeso kemịkal siri ike. Na mgbakwunye, maka nchekwa, uwe ndị ahọpụtara dị na agba ịdọ aka na ntị. A haziri ha maka ndị na-arụ ọrụ na oghere ọha, ọnọdụ ihu igwe siri ike ma ọ bụ n'abalị.
Uche nchebe pụrụ iche na-agbaso ụkpụrụ achọrọ ka European Union tinye na uwe nchekwa. Uwe di iche iche raara nye onodu oru siri ike chebe megide ihe ndi ogwu, ihe onyonyo ikuku, uzuzu na ihe ikuku redio. Ngwa ndị ọzọ nwere zipa na-eme ka ọ dị mfe itinye uwe.
Enwere ike ịzụta ụdị ụdị zuru ezu na ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị www.pm.com.pl ma ọ bụ na ụlọ ahịa anyị na Allegro "PRODUCER-BHP".
Allegro na-arụ ọrụ egoọrụ ụmụ nwanyị karịrị akarịotu iberibeọrụ ụmụ nwoke karịrị akarịmgbochi mmiri na-egbochi mmirina-arụ ọrụ egoọrụ overralls AllegroAudi ọrụ overrallsọrụ ụmụ nwanyị karịrị akarịGdynia emechaaotu iberibeArụ ọrụ Krakowọrụ ụmụ nwoke karịrị akarịa gwara mmanụ ọrụOLX oru gabiga ókèonye na-emeputa iheịgbado ọkụ ọrụ dabaraeji eme iheọrụ karịrị Warsawdakọtara na mbipụtaoge ọrụ oyinchebe ọrụ mkpuchinchedo ọrụ na-apụ apụcoverage na-adịghị arụ ọrụakwa maka akwa coverageọrụ uwe karịrị akarịejiri ọrụ aka mee ihe